- 2016 qiyaas 144,192,450
1 Gosudarstvenny gimn Rossiyskoy Federatsii
Catedrala de l'Intercession de la Verge de Moscòu.
Wadanka ruushka (ru: Россия) waa wadanka ugu weyn aduunka, waxoona ku yaalaa qaaradaha Yurub iyo Aasiya. Weyninka wadanka waxoo gaaraa ilaa 17,098,242 oo isku wareeg ah. Wadanka waxoo leeyahy 83 gobol oo ku kala yaalo meelo kala duwan. Woqooyiga ruushka waa dhul aad u qaboow, oo dad badan degeneen. magaalo waxaa jirto oo lagu magacaabay meesha aduunka ugu qabow. markii laga reebo deegaan kale oo kuyaalo meesha oo aduunka ku dhamaado, waxeena iska leh ruushka.magaalo madaxda wadanka waa Moskow oona ah magaalada ugu wayn dalka, isla markaasneh ah magaalada ugu weyn qaarada yurub.Under Peter The Great, Ruushka waxaa lagu dhawaaqay Boqortooyada 1721 waxaana loo aqoonsan yahay inuu yahay awood caalami ah. Sannadkii 1682 ilaa 1725, Peter ayaa ka adkaaday Sweden Dagaalkii Waqooyiga Ameerika, isaga oo ku qasbay in uu ka soo horjeedo West Karelia iyo Ingria (laba gobol oo ay waayeen Ruushka wakhtiga Dhibaatada),  iyo sidoo kale Estland iyo Livland, oo hubinaya helitaanka Ruushka ee badda iyo badda.  Badda Badda, Peter ayaa aasaasay caasimadda cusub ee Saint Petersburg, oo markii dambe loo yaqaan "daaqadda Europe". Dibuhabaynta Peter ee Great wuxuu saameyn ku leeyahay dhaqanka reer Galbeed ee Yurub.Boqortooyada Peter I ee gabadha Elizabeth ee 1741-62 waxay ku aragtay inay ka qayb qaadatay Ruushka ee Dagaalkii Sano Sano (1756-63). Inta lagu guda jiro colaadaha Ruushka ayaa bari ka dhigay Bariga Prussia mudo ahna waxay ku qaadatay Berlin. Si kastaba ha ahaatee, dhimashada Elisabeth, dhammaan noocyada ay ku soo noqdeen boqortooyooyinka Prussia by Prussian Peter III ee Ruushka.
Catherine II ("Weyn"), oo xukuntay 1762-96, oo hoggaaminaayey dhalashada Ruushka. Waxay sii ballaarisay xukunka siyaasadeed ee Ruushka iyo Lithuanian Commonwealth waxayna ku biireen dhul badan oo ku yaala Ruushka intii lagu guda jiray qaybaha kala duwan ee Poland, kaas oo riixaya galbeedka Yurub ee galbeedka Yurub. Koonfurta, ka dib Dagaalkii Russo-Turki ee Turkiga ee ka soo horjeeda Turkiga, Catherine wuxuu sii waday xuduuda Ruushka ee Badda Badda, isaga oo jabinaya Crimean Khanate. Natiijada guulaha ay ka gaareen Qajar Iran ayaa lagu soo waramayaa Ruushka iyo Rusiya, qeybtii hore ee qarnigii 19aad ee Ruushku waxay sidoo kale samaysay dhul aad u ballaaran oo ku yaala Transcaucasia iyo Waqooyiga Caucasus, taas oo lagu qasbay inay hore u sii wado si aan qarsoodi lahayn Cunaqabatayn ayaa hadda ah Georgia, Dagestan, Azerbaijan iyo Ermena ee Ruushka. Tani waxay sii waday Alexander I (1801-25) fara-gelinta Finland oo ka timid dalka boqortooyo daciifka ee Sweden 1809 iyo Bessarabiya oo ka yimid Ottomans 1812. Isla markiiba, Ruushiyiintu waxay qabteen Alaska iyo xitaa degaannada aasaasiga ah ee California, sida Fort Ross.Template:Federal subjects of Russia image map
En Airbus A330 från Aeroflot i Moskva i juni 2012.
Ruushku wuxuu leeyahay qayb ka mid ah qaybaha kale ee Ukraine ee ku yaal bariga europa oo leh miliatri dhisto badda madow, Ruush wuxuu kaloo leeyahay siyaasad xagal leh oo ah mandaqada bariga ah ee gegiga ah ee gaas dejinta, sanadka 2018-ka Ruushka wuxuu ka dambeeyay dalalaka British-ka ah ee British-ka ah, iyada oo diblomaasiyiin diblomaasiyadeed ka socda dalal badan oo kufilan Australia. Ruushku waa Unugga Xuduudaha ee lagu diidayo xukun kasta oo uu rabo